children – Dhammadīpa
Posted on 8 Jun 2019 by Ashin Sopāka
“In five ways shouldamother and father as the eastern direction be respected byachild: ‘I will support them who supported me; I will do my duty to them; I will maintain the family lineage and tradition; I will be worthy of my inheritance; and I will make donations on behalf of dead ancestors.’
“In this way, the eastern direction is protected and made peaceful and secure.” DN 31
“Pañcahi kho, gahapatiputta, ṭhānehi puttena puratthimā disā mātāpitaro paccupaṭṭhātabbā—bhato ne bharissāmi, kiccaṁ nesaṁ karissāmi, kulavaṁsaṁ ṭhapessāmi, dāyajjaṁ paṭipajjāmi, atha vā pana petānaṁ kālaṅkatānaṁ dakkhiṇaṁ anuppadassāmīti.
“Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi ṭhānehi puttena puratthimā disā mātāpitaro paccupaṭṭhitā pañcahi ṭhānehi puttaṁ anukampanti. Pāpā nivārenti, kalyāṇe nivesenti, sippaṁ sikkhāpenti, patirūpena dārena saṁyojenti, samaye dāyajjaṁ niyyādenti. Imehi kho, gahapatiputta, pañcahi ṭhānehi puttena puratthimā disā mātāpitaro paccupaṭṭhitā imehi pañcahi ṭhānehi puttaṁ anukampanti.
“Evamassa esā puratthimā disā paṭicchannā hoti khemā appaṭibhayā.”
သူကြွယ်သား ငါးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် သားသမီးသည် အရှေ့အရပ်မည်သော မိဘ တို့ကို ပြုစုအပ်ကုန်၏။ (ငါ့ကို ငါ့မိဘတို့) မွေးမြူအပ်၏၊ (ငါသည်) ထိုမိဘတို့ကို ပြန်၍ မွေးမြူအံ့။ ထိုမိဘတို့၏ အမှုကိစ္စကို ပြုအံ့။ မိဘတို့၏ ဥစ္စာကို မပျက်အောင် စောင့်ထိန်းခြင်း၊ အစဉ်အဆက်မှ လာသော ကုသိုလ်ဝတ်ကို ပြု ခြင်းဖြင့် အမျိုးအနွယ်ကို တည်စေအံ့။ အမွေခံထိုက်အောင် (မိဘတို့၏ အဆုံးအမကို) ကျင့်ကြံ လိုက်နာအံ့။ ထိုမှတစ်ပါး ကွဲကွာသေလွန်သော မိဘတို့၏ အလို့ငှါ အလှူပေးအံ့ဟု (ပြုစုကုန်၏)။
သူကြွယ်သား ဤငါးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် သားသမီးသည် ပြုစုလုပ်ကျွေးအပ်ကုန်သော အရှေ့အရပ်မည်သော မိဘတို့သည် အကြောင်းငါးပါးတို့ဖြင့် သားသမီးကို စောင့်ရှောက်ကုန်၏။ မကောင်းမှုမှ တားမြစ်ကုန်၏။ ကောင်းမှု၌ သက်ဝင်စေကုန်၏။ အတတ်ကို သင်စေကုန်၏။ လျောက်ပတ်သော မယားနှင့် ထိမ်းမြားပေးကုန်၏။ လျောက်ပတ်သော အချိန်၌ အမွေဥစ္စာကို အပ်နှင်းကုန်၏။
သူကြွယ်သား ငါးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် သားသမီးသည် ပြုစုလုပ်ကျွေးအပ်ကုန်သော အရှေ့ အရပ်မည်သော မိဘတို့သည် ဤငါးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် သားသမီးကို စောင့်ရှောက်ကုန်၏၊ ထို သားသမီးသည် ဤသို့ လုပ်ကျွေးသည်ရှိသော် ထိုအရှေ့အရပ်သည် လုံခြုံ၏၊ ငြိမ်းချမ်း၏၊ ဘေးကင်း၏။
“Này Gia chủ tử, có năm trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Ðông: “Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời”.
“Này Gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Ðông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con.
“Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Ðông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương tưởng con theo năm cách. Như vậy phương Ðông được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.”
Duck chicks, Hà Nội, Việt Nam
Posted in Dhamma	| Tagged children, dhamma, father, mother, responsibilities, social harmony